साहित्य – nepakhabar
काठमाडौं । कवि बद्री भिखारीद्वारा लिखित ‘समुद्र साउती’ कवितासंग्रह बजारमा आएको छ । बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा भानुजयन्तीको अवसर पारेर कवि तुलसी दिवस, राससका अध्यक्ष तथा कवि श्यामल, स्वप्निल स्मृति, समालोचक महेश पौडेल, जसराज किराँतीले संयुक्त रूपमा उक्त कृति विमोचन गरेका थिए । कार्यक्रममा समालोचक महेश पौडेलले भिखारीका कवितामा शालीन विद्रोह र विनम्रता पाइने धारणा राखे […]
काठमाडौं । नेपाली कलाको इतिहास दुई हजार वर्ष पुरानो रहेको हिमवत् खण्ड कला साहित्य सम्मिलनमा कार्यपत्र प्रस्तोता ठाकुरप्रसाद मैनालीले बताएका छन् । उनले ‘नेपाली कला संस्कृतिको फैँलिदो आकाश र भावी दिशा’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै इसापूर्वमा बनेका गजलक्ष्मी, अष्टमात्रिका तथा सूर्यका प्रस्तर मूर्तिले नेपाली कलाको ऐतिहासिकता झल्काउने गरेको बताए । नेपाली भाषाका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको […]
सुशीलले ल्याए ‘गुराँसहरू पलाँसहरू’
मेलबर्न । कवि सुशील चालिसेद्वारा लिखित मुक्तकसंग्रह ‘गुराँसहरू पलाँसहरू’ मेल्बर्नमा सार्वजनिक गरिएको छ । भिक्टोरियाका लागि अवैतनिक महावाणिज्यदूत चन्द्र योञ्जन र लुम्बिनी–कपिलवस्तु दिवस अभियानका विश्व संयोजक रामकुमार श्रेष्ठले सो कृति संयुक्त रूपमा विमोचन गरेका हुन् ।जहाँ भावुकता हुन्छ, त्यहाँ साहित्यको सिर्जना हुने कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि योञ्जनले बताए । उनले भने, ‘पुस्तकका लेखक चालिसेले अझै सशक्त […]
काठमाडौं । यौन मनोविज्ञानमा आधारित चलचित्र ‘मिस्टर भर्जिन’ को टिजर सार्वजनिक गरिएको छ । आगामी १ भदौबाट देशभर प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको यो चलचित्रको टिजर आइतबार युट्युबमार्फत रिलिज गरिएको हो । तीनजना पुरुषले कन्डम माग्न नसकेको तर अभिनेत्री मरिष्का पोखरेलले सहजै कन्डम मागेको दृश्य टिजरमा देखाइएको छ । विशारद बस्नेतले निर्देशन गरेको यो चलचित्र वल्र्ड […]
काठमाडौं । बेलायतमा रहेका नेपाली साहित्यकारले बकिंघम शायरको कुम्ब हिलमा शनिबार काव्ययात्रा सम्पन्न गरेका छन् । समकालीन साहित्य प्रतिष्ठान बेलायतको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा नेपाली माटो र समसामयिक विश्व परिदृश्यलाई कवितामार्फत अभिव्यक्त गरिएको थियो । काव्ययात्रामा डा. सुनिल महर्जन, सञ्जु बजगाईं, विभाष सापकोटा, अभियान घिमिरे, मञ्जु न्यौपाने, सुयश बजगाईं, मुकेश श्रेष्ठ, मीना महर्जन, राजेश्वरी घिमिरे, […]
शर्मालाई लीलाध्वज साहित्य सम्मान
काठमाडौं । नेपाली साहित्यमा लामो समयदेखि सक्रिय साहित्यकार तारानाथ शर्मालाई लीलाध्वज थापा साहित्य प्रतिष्ठानले ‘लीलाध्वज साहित्य सम्मान’ प्रदान गरेको छ । सम्मानका साथ २५ हजार राशि र ताम्रपत्र छ । कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष तथा लीलाध्वजका सुपुत्र साहित्यकार विजयध्वज थापाले प्राडा. शर्मालाई दोसल्ला ओढाएर नगदसहित सम्मानपत्र हस्तान्तरण गरे । नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति गंगाप्रसाद उप्रेतीको प्रमुख आतिथ्यमा […]
बेहोसीले ल्याइन् ‘सेतो स्कार्फ’
काठमाडौं । कथाकार सविता श्रेष्ठ ‘बेहोसी’ द्वारा लिखित कृति ‘सेतो स्कार्फ’ कथा संग्रह शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ । साहित्यकार तुलसी दिवसले कृतिको लोकार्पण गर्दै नेपाली समाज, पात्र, चिन्तन, सोच, संवेदना र आन्तरिक भावना व्यक्त भएका सिर्जनाहरू मात्र चिरस्थायी हुने बताउँदै कथाकार सविताका कथामा ती विषय रहेको धारणा राखे । कार्यक्रममा संगीत नाट्य प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका कुलपति […]
रचना समीक्षाः ‘तादी किनारको गीत’ मा समाज मनोविज्ञान
१. परिचय महेश पौड्याल समकालीन नेपाली साहित्यका सशक्त र क्रियाशील साहित्यकार हुन् । साहित्यका विभिन्न विधा तथा क्षेत्रमा उनको महत्वपूर्ण उपस्थिति रहेको देखिन्छ । कविता कथा, उपन्यास, समालोचना जस्ता विविध विधामा मात्र नभई अनुवाद साहित्य तथा बालसाहित्यमा पनि पौड्याल निकै सक्रिय देखिन्छन् । बहुमुखी प्रतिभा भएका युवा साहित्यकार पौड्याल विभिन्न साहित्यक संघ संस्था तथा साहित्यिक […]
पुस्तक चर्चा: कम्पनभित्रको कम्पन
हाम्रो आफ्नै संसार थियो । दुईजना छोरा, श्रीमान् र छोरीसँगै रसुवाको डाँडा डोलमा बस्दै आएका थियौँ । हामी दम्पतिले दुःखजिलो गरेर भए पनि परिवारलाई खसी नै राखेका थियौँ । छोरा छोरीलाई पढाइरहेका थियौैँ, त्यो दिन म घरनजिकैको बारीमा काम गरिरहेकी थिएँ । श्रीमान् पिँढीमा बसिरहनु भएको थियो । १७ वर्षको जेठो छोरा घरभित्र बसेर […]
-छायादत्त न्यौपाने ‘बगर’ सम्पन्नताको स्रोत शिक्षा हो । चेतनाको बिउ शिक्षा हो । समग्र उन्नतिको मुहान शिक्षा हो । मानवको कल्याण शिक्षाबाटै हुन्छ । मुहानबाट निस्केर समाज सिञ्चन शिक्षाले गर्छ । शिक्षाबाट सिञ्चित समाज सम्पन्न हुन्छ । वैज्ञानिक व्यवहार सिकाएर समयसापेक्ष बन्न शिक्षाले कर्ममा उतार्छ । नैतिक मूल्यमा अड्याएर मानव धर्म पछ्याउन शिक्षाले नै प्रेरित […]